Jinka iyo dadka kee qurux badan? – Kaasho Maanka
Inta aynaan jinka iyo dadka ka faalloon waxa aynu xoogaa ka taabanaynaa geela oo ah xoolaha nooca ugu sharaf badan, uguna macquulsan. Geela rati ama awr xoog yar oo foolxumi ma abaahiyo. ”Abaahi” waa galmada geela. Dabeecadda ayaa keentay in uu geela dhaddig abaahiyo rati xoog, dhiirranaan iyo qurux isku darsaday. Geela abaahidiisa waa loo halgamaa oo ratigii halganka ku guulaysta ayaa dhammaan dhaddiga abaahiya, awrta aan xoogga lahaynina waxa ay dhintaan iyaga oo aan waxba abaahiyin. Ratiga xoogga iyo dhiirranaanta lihi ma uu oggola in ay awr kale geela dhaddig u soo dhawaadaan oo waa uu dilaa ratigii kale ee isku daya in uu wax abaahiyo.
Sharaf iyo wanaag bay geela u tahay in uusan rati liitaa abaahiyin oo dabeecadda ayaa rabta in uu dhasho geel xoog leh oo qurxa badan oo uu dhalay rati macquul ahi. Haddii uu rati jirroole ah ama xoog yar ama foolxumi geela abaahiyo waxa uu dhalayaa geel isaga la mid ah, sidaas darteedna dabeecadda ayaa ilaalisa geela dhaladnimadiisa iyo quruxdiisa. Markii uu rati hal roorsanayo ama uu kufsanayo hashu waa ay rabtaa ee waxa ay uga carartaa in ay tijaabiso in uu xoog iyo caafimaad leeyahay oo uu dhali karo ubad isaga la mid ah. Markii uu xoog ku kufiyo ayey abasax noqotaa oo ay jeclaataa.
Dadku waxa ay samaysteen dhaqan ka liita midka geela oo ah in uu nin kastaa xaq u leeyahay naag uu wax ka dhalo, taasina waxa ay keentay in ay dadka ku bataan foolxumada iyo jirrooyinku. Run ahaantii haddii qawaaniinta dabeecadda la raaco nin kastaa in uu wax wasaa waa khalad. Waxaa sax ah oo dabiici ah in ninkii xoog leh oo geesi ahi uu laayo ama cayriyo ragga ka xoog yar oo uu isagu waso naagaha oo dhan si ay dadku u noqdaan noole qurux iyo caafimaad leh. Waxa aad arkaysaa nin gaaban oo caato ah oo fule ah oo naag iyo carruur wata, waana dhaqan khaldan in uu nin sidaas ahi naag guri ku haysto iyada oo ay joogaan rag xoog iyo geesinnimo isku darsaday oo xaq u leh in ay dhalaan carruur macquul ah. Dumarku ma ay yeeleen in uu waso nin tacbaan ahi oo waxa ay dabeecad ahaan rabi lahaayeen nin xoog weyn oo dhiirran oo kufsada si ay u uuraystaan ilmo fiican. Dhaqanka ayaa dumarka ku khasbay in ay guri u joogaan fule itaal daran.
QORMO LA XIRIIRTA: Alle weyne tolow ahaanshihiisa maka fikiraa?!
Haddaba jinku in kasta oo uusan jirin ee uu khiyaali yahay waxaa faafay sheekooyin iyaguna khiyaali ah oo ku saabsan galmada jinka. Waxaa la wada og yahay in ay soomaalidu yihiin dadka ugu qurux badan ummadaha dhulka ku dhaqan. Quruxda waxa ay ka keeneen in xilligii Arraweelo ay ragga insiga ah dhufaani jirtey uu baarqab ama hanad jin ahi ogaadey in raggii insiga la dhufaanay, ka dibna doolaalo ayuu ku yimid caalamka insiga. Waxa uu ahaa hal jin ah oo aad u qurux badan oo u xoog badan, waxaana jeclaatay Arraweelo oo damacday in uu keligeed u gaar ahaado, dumarka kalena ay rag la’aan ahaadaan. Ninkii jinka ahaa la ma uu tashan Arraweelo ee waxa uu kufsaday iyadii iyo naagihii soomaalida ee kale oo dhan. Arraweelo oo ahayd boqorad kibirtey markii ay aragtay dhiirranaanta iyo xoogga ninkaas jinka ah bay naagnimo iyo edeb oggolaatay oo ay qabjabtay, waxa uuna jinkaasi muddo dumarka soomaalida ka dhalayey carruur qurxo badan.
Qisadaas darteed waxaa la aamminsan yahay in uu jinku ka dhaqan duwan yahay dadka oo uusan ninkii jin ah oo tabar darani xaq u lahayn in uu naag waso, waayo baarqabkii jinka ee Arraweelo iyo dumarka soomaalida oo dhan wasay keligiis buu wasayey oo waxaa la qiyaasi karaa in uu dhaqankaas ka keenay jinka. Waxa la malayn karaa in uu keligiis hore ugu galmoon jirey dumarka jinka oo dhan. Sidaas darteed bay jinku uga qurux badan yihiin oo uga dhaladsan yihiin waxa insiga la yiraahdo oo fuulaha xun. Dadku marba marka ka danbaysa waa ay soo foolxumaanayaan, waana ay jirro badnaanayaan, waayo waxaa dhala rag aan dabeecad ahaan xaq u lahayn wasmo.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxaa leh qoraaga ku saxeexan.
meeyey qofkii ku saxeexnaa qormadan hadaydaan idinku shaqo ku lahayn waxan oo kale idinka ayaa ka raali ah waan in la idin raacaa dhoorayaaloow waxaad ka heshaan baad leedahiin diintii ilaahaybaad meel kaga dhacdeene
Folxumaa oo foolxuma waxad qortaY☹
Qoralkaga wxa ka muuqda jaahilnimo
IYo doqonimo waYn
Wxba afeef aan jirin ha ku marmarsiYoon
WaY iska cadaY inaad adigu alifataY
Qudhunkan iYo folxumadane
Wxaad ka heshaad ledahaY
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 6th March 2018